ladepeche, Auteur à La dépêche de MadagascarLa dépêche de Madagascar
La dépêche de MadagascarArchives	Raharaha 7 febroary: Mitaky ny hampiharana ny didim-pitsarana ny AV 7	20/01/2017	Rédigé par:	ladepeche
Laisser un commentaire	Mbola manohy ny tolona ireo niharam-boina sy ny havan’ireo maty vokatry raharaha 7 febroary 2009. Namoaka fanambarana omaly ny fikambanana AV7 izay ivondronan’ireo rehetra voakasik’iny raharaha iny ny amin’ny tokony hanatanterahana ny didim-pitsarana (ndlr : arrêt n°297 de août 2010) izay manameloka ireo izay nahavanon-doza sy nanatanteraka iny vono olona mahatsiravina iny. Ankoatra ny fanagadrana…
Rano anaty tavoahangy: Diso fanantenana ireo mpivarotra mpanararaotra	20/01/2017	Rédigé par:	ladepeche
Laisser un commentaire	Nifandroritana ny fividianana rano anaty tavoahangy plastika teny an-tsena sy teny amin’ireo tranombarotra lehibe tato ho ato. Nanararaotra izany ny sasany tamin’ireo mpivarotra ka nampiakatra ny vidin’izany hatrany amin’ny 100%. Fantatra mantsy fa raha manodidina ny 1.200 ariary ny singany iray amin’ny andro mahazatra dia, nahatratra 2.500 ariary izany. Ary teny amin’ny tsena sasany aza…
Taombaovao malagasy: Mbola tsy misy andro raikitra tapaka	20/01/2017	Rédigé par:	ladepeche
Laisser un commentaire	Nanatanteraka fihaonana teny amin’ny Tranombokim-pirenena tetsy Anosy ny komity ivondronan’ireo mpandala ny soatoavina malagasy afak’omaly hariva. Niompana tanteraka tamin’ny fankalazana ny taombaovao malagasy ny valandresaka nataon’ireo taranak’andriana nivory teny an-toerana. Mitady ny marimaritra iraisana mba hanondrona andro iray iombonan’ny Malagasy rehetra hankalazana io fetibe io no tanjon’izy ireo. Ny vondrona natsangana tamin’ny volana aprily lasa…